Gargaarka Somaaliya - BBC Somali
Image caption Dadka ka soo barakacay abaaraha
Marka la eego baahida cuntada ee ka jirta Soomaaliya gargaarkan dayuuradda lagu geeyay waxaa uu la mid yahay dhibic badweyn ku dhacday. Kudhowaad kala bar dadweynaha Soomaaliya waxay u baahan yihiin gargaar cunto oo degdeg ah abaarta aadka u ba'an awgeed.
Hase ahaatee rajo badan ayaa jirta in duullimaadyada gurmadka abaarta iyo weliba xagga badda ay mucaawinooyinku iska soo daba dhici doonaan. Barnaamijka cuntada ee Qaramada Midoobay waxay sheegeen inay dalka Sacuudiga ka heleen ballanqaad in la siinayo 50 milyan oo dollar oo raashin loogu iibiyo qaxootiga Soomaalida.
Dhawaaqani waxaa uu yimid kaddib markii xoghayaha guud ee QM, Ban Ki-Moon, uu ugu baaqay Sacuudiga iyo hoggaamiyeyaasha waddammada kale ee khaliijka Carabta inay kordhiyaan deeqaha loogu talo galay in wax lagaga qabto dhibaatada macluusha soo foodsaartay malaayiin qof dalalka Afrikada bari.
Ilaa iyo hadda, Dalka Immaaraadka Carabta ee Midoobay ayaa meesha ugu sarreysa uga jiray Waddamada Carabta ee deeqda Soomaaliya lagu gargaarayo siiyay barnaamijka cuntada adduunka ee WFP, taasoo ahayd ku dhowaad labo milyan oo dollar laakiin weli waxaa ka hoorreeya dalalka Ireland iyo Switzerland. Kuwait ayaa sidoo kale ballan qaadday toban milyan oo dollar, hase yeeshee waddammada kale Khaliijka meel u dhow ma soo gaarin.
Waxaa jirta dhaliilo ka imanaysa meelo kala duwan in dalalka khaliijka ee hodanka ah ay iska dhegatirayeen dhibaato ka taagan meel aad ugu dhow waddammadooda, dal muslim ah oo ka tirsan jaamacadda carabta. Laakiin sidaasi ma ahan sida ay khaliijku u arkaan, halkaas oo Soomaaliya looga haysto guud ahaan inay tahay dal Afrikan madow ah oo wax badani aanay kala dhexay Sacuudiga iyo Kuwait midnaba.
Laakiin iyadoo bisha barakeysan ee Ramadaan ay soo dhowdahay dhaqankuna yahay in wax la bixiyo, television-nada carabtana ay ka soo baxayaan muuqaallo laga xumaado oo Soomaaliya ka imanaya, waxaa dhici karta in waqti uun uu naga xigo inta hoggaamiyeyaasha Khaliijku ay ka soo jawaabayaan.
Kontanka milyan ee dollar ee Sacuudigu bixiyay waxay gelinaysaa meesha 2aad oo Maraykanka ayaa ka horreeya liiska deeq-bixiyeyaasha ee Soomaaliya. Saraakiil WFP ka tirsanna waxay rumaysan yihiin in Sacuudigu ballantiisa ka soo bixi doono.
Guddoomiyaha hay'adda gargaarka ee Midowga Yurub, Kristalina Geogieva, waxay ku dhawaaqday qorshe lagu kordhinayo lacagta lagu caawinayo dadka ay saameysay abaarta iyo macluusha geeska Afrika. Iyadoo ka soo noqotay socdaal xerada ugu weyn ee qaxootigu ku jiraan ee dalka Kenya, Miss Georgieva waxay sheegtay in Midowga Yurub uu dhaqso u bixin doono 40 milyan oo dollar oo kale oo lagu kordhinayo 70 milyan oo dollar oo ay hore gobolkaas u siiyeen.
Si kastaba ha ahaatee, ra'iisal wasaaraha Soomaaliya waxaa uu ka cawday in QM ay la gaabinayaan keenidda cuntada. Dhibaatada haysata hay'adaha gargaarka waa mid aad u weyn laakiin dadka arrimahan dersa qaarkood waxay su'aal iska weydiinayaan sababta abaartan looga hortegi waayay, maadaama sanadkii hore la sii saadaaliyay inay dhici doonaan abaar aad u daran iyo cunto yaraan.